ပဋိပက္ခဖုံး… ပြည်သူချင်းအမုန်းမှ…. နိုင်ငံ့အရှုံးဆီသို့ မဖြစ်ရေး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeပဋိပက္ခဖုံး… ပြည်သူချင်းအမုန်းမှ…. နိုင်ငံ့အရှုံးဆီသို့ မဖြစ်ရေး
ပဋိပက္ခဖုံး… ပြည်သူချင်းအမုန်းမှ…. နိုင်ငံ့အရှုံးဆီသို့ မဖြစ်ရေး
မေ ၁၀၊ ၂၀၁၇ M-Media
← လူတိုင်းသိထားသင့်သည့် ကာကွယ် ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ
Police fire warning shots as extremists speed up their anti-Muslim operations in capital city →